Eyona midlalo yebhodi yosapho | Ndinike ixesha lokuphumla
UIsake | 17/12/2021 17:47 | Ukuhlaziywa ukuba 21/12/2021 09:02 | ngokubanzi
Zimbalwa izinto ezingcono kunokuchitha ixesha nabantu obathandayo, neqabane lakho, usapho lwakho, okanye abantwana bakho. Ukuchitha iintsuku, iimvakwemini kunye nobusuku kudlala ekhaya kwaye ushiya awona maxesha angalibalekiyo aya kuhlala ekhunjulwa. Kwaye ukuze oku kwenzeke, uya kufuna ezinye ze imidlalo yebhodi engcono yosapho. Koko kukuthi, imidlalo yebhodi ethandwa ngumntu wonke, abantwana, abafikisayo, abantu abadala kunye nabadala.
Nangona kunjalo, ngenxa yenani lemidlalo ekhoyo kunye nokuba kunzima kangakanani ukwenza wonke umntu abe mnandi, akungomsebenzi olula ukuwukhetha. Apha siyakunceda ukuba uyenze, ngezinye zeengcebiso ezilungileyo, nge ithengisa kakhulu kwaye imnandi ungafumana ntoni...
1 Eyona midlalo yebhodi ingcono yokudlala nosapho
1.2 Usapho olungenamsebenzi
1.4 Ukuchuma kosapho
1.6 Uthando ngamagama Ushicilelo lweentsapho
1.7 Bizak Abantwana ngokuchasene nabazali
1.9 Bang! Umdlalo weWild West
1.10 Gloom InopportuNdwendwe
2 Imidlalo yebhodi yolonwabo eninokuyidlala njengosapho
2.1 Umdlalo Off Ibutho leentloko ezimbini ukuya entloko
2.3 Iityhubhu zebali
3 Indlela yokukhetha umdlalo webhodi yentsapho elungileyo?
Eyona midlalo yebhodi ingcono yokudlala nosapho
Kukho imidlalo yebhodi enokudlalwa njengentsapho ephakathi kweyona ibalaseleyo. Imisebenzi yokwenene yobugcisa bokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa ukuchitha awona maxesha angcono kunye nabantu obathandayo kwaye bahlala benoluhlu olubanzi lobudala, ukongeza ekuvumeni amaqela amakhulu abadlali. Abanye i ngcebiso Zizo:
I-Diset-Ipati kunye nosapho losapho ...
YiPati yakudala, kodwa kuhlelo olukhethekileyo losapho. Ifanelekile ukusuka kwiminyaka eyi-8 ubudala. Kuyo kufuneka wenze iimvavanyo ezininzi xa ilithuba lakho, kwaye inokudlalwa ngokwamaqela. Xelisa, zoba, linganisa, phendula imibuzo, kwaye uphumelele imibuzo eyonwabisayo. Indlela yokuphucula unxibelelwano, ukubonwa, umdlalo weqela, kunye nokoyisa iintloni.
Thenga Ipati & Co.
Umdlalo webhodi encinci ...
Umdlalo olungele yonke iminyaka ukusuka kwi-8 yeminyaka ubudala. Ngumdlalo weklasi yombuzo kunye nempendulo, kodwa kuhlelo losapho, njengoko lubandakanya amakhadi abantwana kunye namakhadi abantu abadala, kunye nemibuzo engama-2400 yenkcubeko ngokubanzi ukuvavanya ulwazi lwakho. Ukongeza, umngeni weShowdown ubandakanyiwe.
Imidlalo yeMattel -...
Bangadlala bonke ukusuka kwi-8 yeminyaka ubudala, kunye namandla okudlala ukusuka kubadlali aba-2 ukuya kwaba-4 okanye benze amaqela. Ngomnye wemidlalo yebhodi efanelekileyo kwiintsapho, ezinjongo yazo ikukuqikelela igama okanye ibinzana ngemifanekiso. Ibandakanya ibhodi emhlophe, iziphawuli, amakhadi esalathiso, ibhodi, iwotshi yexesha, idayisi, kunye namakhadi angama-720.
I-BOOM YOSAPHO-Umdlalo we ...
Usapho lonke lunokubandakanyeka kulo mdlalo wakudala. Amakhadi angama-300 ahlukeneyo kwaye amnandi, ibhodi, kulula ukudlala, kunye nemiceli mngeni, izenzo, amaqhina, ukutolika, isohlwayo sokukopa, njl. Indlela entle yokuhlanganisa bonke abantu obathandayo kwaye ube nexesha elimnandi.
IRepos Production-Concept ...
Intsapho yonke inokudlala, inconywa ukusuka kwiminyaka eyi-10 ubudala. Ngumdlalo omnandi noguqukayo apho uphuhlisa khona ubuchule bakho kunye nengqondo yokusombulula iipuzzle. Umdlali kufuneka adibanise ii-iyikhoni zehlabathi okanye iisimboli ukuzama ukwenza abanye baqikelele ukuba ingantoni na (abalinganiswa, izihloko, izinto, ...).
Uthando ngamagama Ushicilelo lweentsapho
Umdlalo wabancinci nabadala, wokudlala njengosapho kwaye uncede ukuqinisa ubudlelwane phakathi kwabathathi-nxaxheba. Yenzelwe ukutsala umdla kubazukulwana, ootatomkhulu, abazali kunye nabantwana, ukubanceda babe nexesha elimnandi kunye namakhadi ali-120 anemibuzo eyonwabisayo kunye nokhetho olukhokelela kwizihloko ezahlukeneyo zencoko.
Bizak Abantwana ngokuchasene nabazali
I-Bizak Game Oonyana ngokuchasene ...
Enye imidlalo yebhodi engcono kakhulu yosapho, kunye nemibuzo kunye nemingeni kuwo onke amalungu. Ophumeleleyo uya kuba ngowela ibhodi kuqala, kodwa ngenxa yoko kufuneka ufumane imibuzo ngokufanelekileyo. Idlalwa ngokwamaqela, kunye nabantwana ngokuchasene nabazali, nangona amaqela axubileyo nawo anokwenziwa.
Ukuthenga abantwana ngokuchasene nabazali
Kulo mdlalo webhodi yosapho, umdlali ngamnye uthatha indima yesilwanyana esixutyiweyo ekufuneka sisindise intombazana ayithandayo, njengoko iye yaxhwilwa yinto engendawo neyimfihlakalo. Incwadi yamabali ebandakanyiweyo iya kusebenza njengesikhokelo ebalini kunye namanyathelo amawalandelwe ebhodini ...
Thenga iintsomi ezigxunyekiweyo
Bang! Umdlalo weWild West
Umdlalo wekhadi okubuyisela kumaxesha e-Wild West, kwisitrato esinothuli kunye ne-duel yokufa. Kuyo, abaphulimthetho baya kujongana nesherifu, isherifu ngokuchasene nabaphuli-mthetho, kwaye umkreqi uya kuqambela icebo eliyimfihlo lokujoyina nayiphi na i-bamdos ...
Umdlalo apho kuya kubakho iindwendwe ezoyikisayo, usapho lwemigulukudu, kunye nendlu enkulu. Yintoni enokonakala? Lo ngumdlalo wekhadi likaGloom, oza njengokwandiswa komdlalo osisiseko.
Ukuthenga iiNdwendwe ezingafanelekanga
Imidlalo yebhodi yolonwabo eninokuyidlala njengosapho
Kodwa ukuba le nto uyifunayo kukuya phambili kancinci kwaye ufumane eyona midlalo yebhodi ihlekisayo ukuba ungayeki ukuhleka, ukukhala ngokuhleka, kwaye wenze isisu sakho sibe buhlungu, nazi ezinye. izihloko eziya kukwenza ube nexesha elifanelekileyo:
Umdlalo Off Ibutho leentloko ezimbini ukuya entloko
Umdlalo uvaliwe-Ibutho ...
Umdlalo webhodi yentsapho efanelekileyo kuyo yonke iminyaka, eyenzelwe abantu abakhuphisanayo nababalulekileyo. Ine-120 yeeduel ezizodwa zokwenza ubuso ngobuso nezalamane zakho. Kuzo kufuneka ubonise amandla akho, ithamsanqa, inkalipho, amandla engqondo okanye ngokwasemzimbeni. I-duels ekhawulezayo kwaye eyonwabisayo iyenziwa, ngelixa abanye abadlali besebenza njengejuri ukwenza isigqibo ngophumeleleyo. Uyafuna?
Thenga Umdlalo Off
Glop Mimika-Umdlalo we...
Omnye wemidlalo oyithandayo kwiintsapho oza kuvavanya umonde wakho, unxibelelwano kunye nokukwazi ukuhambisa ngokulinganisa. Ilungele abantwana, abafikisayo kunye nabantu abadala. Wonke umntu uya konwaba ngokudlala kunye nokusebenzisana. Ibandakanya amakhadi angama-250 eendidi ezahlukeneyo kwaye kuya kufuneka wenze abanye baqikelele into ofuna ukuyiveza ngezimbo zomzimba.
Lo mdlalo ngowabo bathanda ukucinga, ukuyila kunye nokubalisa amabali amnandi. Inedayisi ezisi-9 (imeko, isimboli, into, indawo, ...) onokuthi uyiqengqe ngaphezulu kwesigidi esi-1 sendibaniselwano kumabali ekufuneka uwadale ngokuxhomekeke kwinto oze nayo. Ifanelekile iminyaka eyi-6 nangaphezulu.
Umdlalo weHasbro-Twister ...
Omnye umdlalo ongcono kakhulu wokuzonwabisa kosapho. Inemathi enemibala apho kuya kufuneka uxhase inxalenye yomzimba eboniswe kwibhokisi ye-roulette apho uhleli khona. Imizobo iya kuba ngumngeni, kodwa ngokuqinisekileyo iya kukuhlekisa.
Imidlalo yeCocktail- Ugha ...
Umdlalo wekhadi losapho lonke, olulungele iminyaka eyi-7+. Kuyo ungena ezicathulweni zesizwe sangaphambili se-cavemen, kwaye umdlali ngamnye kuya kufuneka aphinde uthotho lwengxolo kunye nokugrumba ngokwamakhadi aphumayo kunye nenjongo yokuba yinkokeli entsha yesizwe. Into ekhohlisayo ngalo mdlalo kukuba kuya kufuneka ucengceleze izandi okanye iintshukumo zamakhadi aya kuthi ngokuthe ngcembe aqokelele kwaye kufuneka uwadlale ngendlela eyiyo ...
Thenga Ugha Bugha
I-Ubongo ngomnye wemidlalo eyonwabisayo yosapho lonke, ecetyiswa ngabantu abangaphezu kweminyaka eyi-8. Abaqulunqi bayo bayaqinisekisa ukuba iyaphithizela ngenxa yendlela abadlali abaza kuzama ngayo ukudibanisa iziqwenga kwiqela labo ngaxeshanye; kuyakhobokisa kuba xa uqala awuzukwazi ukuyeka; kwaye kulula ngokwemigaqo yayo.
Indlela yokukhetha umdlalo webhodi yentsapho elungileyo?
Ukukhetha kakuhle eyona midlalo yebhodi yosapho, ezinye iinkcukacha ezibalulekileyo kufuneka zithathelwe ingqalelo:
Kufuneka babe negophe lokufunda elilula. Kubalulekile ukuba ii-mechanics zomdlalo ziqondeke ngokulula kwabancinci nabadala.
Zifanele zingaphelelwa lixesha kangangoko kunokwenzeka, kuba ukuba zihlobene nezinto zamandulo okanye zale mihla, abancinane nabakhulileyo baya kulahleka ngandlel’ ithile.
Kwaye, ngokuqinisekileyo, kufuneka kube mnandi kuye wonke umntu, kunye nomxholo oqhelekileyo kwaye ungajoliswanga kubaphulaphuli abathile. Ngamafutshane, yiba noluhlu olubanzi lobudala obucetyiswayo.
Umxholo kufuneka ube ngabo bonke abaphulaphuli, oko kukuthi, akufuneki uthintelwe kubantu abadala kuphela.
Ukuba yintsapho yonke, kufuneka ibe yimidlalo apho unokuthatha inxaxheba kumaqela okanye ukuvuma inani elikhulu labadlali ukuze kungabikho mntu ushiywe ngaphandle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » ngokubanzi » Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yosapho